Esigqokeni sakwabesifazane kunezinto eziningi ezifanelwe ukunakwa okukhethekile, kodwa kunezinto ezinjalo ongakwazi ukuzidlula ngaphandle komdlandla. Kuthi mayelana noboya obubi, inombolo eyodwa yokufinyelela ehamba phambili. Kuyinto efana ne-cape efana ne-rectangle. Ubude nobubanzi bungase buhluke, ukuze ubuso obubi busetshenziswe njengesikhafu esikhulu, noma njengesikhafu.
Ngo-1676 uPrincess Palatine wasebenzisa isembozo somboya omncane, esisebenzisa njengento yokufinyelela efudumele. Igama lakhe liphinde lisebenze njengegama laleli festile kuze kube yimanje imininingwane yezingubo zokugqoka. Kuwo wonke umlando wayo, wawushintshiwe kancane, wenziwa ngezinto ezihlukahlukene, kodwa okunethezeka ngempela kuyisibonelo somboya wemvelo. Ngokuvamile, i-mink, i-chinchilla, i-Fox ne-fox yase-arctic isetshenziselwa ukwenza iziqu.
Namuhla, ngenxa yobuchwepheshe bamuva, abantu baye bafunda ukuthi bangakha kanjani uboya obufakelwayo, okuyinto kwezinye izimo kunzima ukuhlukanisa kusuka ekukhohliseni. Imikhiqizo enjalo ingabizi kakhulu, kodwa ingaphansi kwekhwalithi. Futhi, naphezu kwalokhu, uboya obunjalo obubi buba nombukiso ongafanelwe. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ingaba nge-shades ehlukene, kusuka eziklasini kuya ezixazululo ezicacile.
Ubuchopho obomvu abubuki nje kuphela, kodwa okungenani bukanokusho, ngakho-ke kungcono ukuwusebenzisa ukuze uthole izenzakalo ezinjalo. Isibonelo, isenzakalo esihle kakhulu kungaba umshado ohleliwe ngenkathi epholile. Uma umakoti engafuni ukugqoka ingubo, angazifudumala ngebibi elimhlophe. Inhle kakhulu iyobukeka i-cape eside nge-evening noma i- cocktail dress .
Kulungile ukudala isithombe sansuku zonke kungcono ukukhetha isitebe esinomsoco. Kungenziwa kuhlangene namabhulukwe, ama-jeans, ama-blouses nama-tunics. Yile ngubo ezoba yinto evelele esithombeni sakho.
Abanye besifazane abasebenzisa imfashini basebenzisa le nkambiso njengesihloko sekhanda. Isibonelo, u-fur mink kusuka eminkini ngeke nje ithathe indawo yesikhwama ebusika, kodwa futhi isebenza njengento yokunethezeka egumbini, enikeza ubuhle bayo bomnikazi. Futhi ingabekwa ngengubo yesikhumba futhi ihlelwe ngengubo emnyama. Indwangu evamile iyoba ngokushesha ibe yindabuko futhi imnandi kakhulu.
Izindlela zokuhlanganisa izikhwama nezinhlamvu
Bijouie Fashion Jewelry
Amakha amazinyane angcono kakhulu
Isikhwama esetheni - yini okufanele ukhethe nokuthi yini ongayigqoka?
Isikhwama "amashumi amane"
I-perfume ebiza kakhulu kunabesifazane
Imimoya kaJimmy Chu
I-Perfume I-Red Moscow
Izigqoko eziboshiwe ngoboya
Amadonga ezindawo ekamelweni
Mackerel namazambane kuhhavini
Izithunzi zamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka
U-Pamela Anderson waphuma enkampanini eya esiteji sembukiso yezinkolelo
Amakhukhi anokubikezela - iresiphi
Caviar yemifino ngokusebenzisa i-grinder yenyama ebusika - iresiphi
Fundazol - uhlelo lokusebenza
Ikamelo le-Art Nouveau
I-Diakarb - ezifanayo
I-Pea puree ku-multivark
Izinkomba zekhishi - zonke izinzuzo nezingozi zezinto zanamuhla
Izandiso Zezinwele Ze-Hollywood
Moss izimbali - kanjani ukuqeda?
Yini ephilisa i-rheumatologist, nini ukuya kudokotela, futhi yisiphi iseluleko okufanele silandele?
Ukugqoka okubomvu omfushane ku-prom
Kungani inja idonsa?
I-fish loban - okuhle nokubi
Usuku Lengelosi YaseVictoria
I-Visa eya eNepal
Indlela yokuthuthukisa ingane enyangeni engu-1?
Lecho yamakhukhamba ebusika - zokupheka ezingavamile zokulondoloza okumnandi nokuqala